Bisadda quruxda badan ee Toyger | Bisadaha Noti
Bisadda quruxda badan ee Toyger
Haddii aad jeclaan lahayd inaad guriga ku haysato shabeel yar oo kalgacal leh oo kalgacal leh sida kuwa kale oo yar, bisadda toyger-ku shaki la’aan waa noocaaga. Ninkan dhogorta badan wuxuu jecel yahay inuu noqdo udub dhexaadka dareenka, sidaa darteed wax badan oo uusan ka labalabeynin inuu ku fadhiisto dhabta dhabta midka ugu horreeya ee isaga fiiro gaar ah u leh.
Isagu waa mid dabiici ah, sidaa darteed haddii mustaqbalka aad rabto inaad ku ballaadhiso qoyska, midkan yar dhibaatooyinka haysta, in kastoo ay soo if-bixi karaan, waxaa lagu xallin doonaa si ka dhakhso badan sidaad moodeysay.
1 Asalka iyo taariikhda bisadda Toyger
2 Astaamaha bisadda Toyger
4 Daryeelka bisadda Toyger
6 Sawirada bisadaha Toyger
Asalka iyo taariikhda bisadda Toyger
Jilaagayaga timo xaragada leh wuxuu safarkiisa ku bilaabay aduunka oo dhan 1980, markii Judy Sudgen, oo ah abuure taranka, xulay bisadaha guryaha ee lahaa qaabka ugu fiican ee madow ee ku jira shabeelka, oo loo yaqaan mackerel tabby. Wax yar ka dib, waxaa lala soo tallaabay dabka si loogu daro midabka midabka casaanka ah, ka dibna sanka iyo faraha dhaadheer ayaa wax laga beddelay.
Dhanka kale, dabeecaddiisii ​​sidoo kale way is bedeshay: wuxuu noqday mid aad iyo aad u hoyaad badan, kalgacal badan. Sida laga soo xigtay Judy lafteeda, uma jeedin inay dib u soo ceshato wixii dabiiciga ahaa ee ay ku sameeyeen shabeellada, laakiin waxay dooneysay inay abuurto dhogor dhogor leh oo leh astaamaha bisadaha waaweyn oo ku noolaan kara qoys ahaan.
Astaamaha bisadda Toyger
Bisadda Toyger waa mid cabirkeedu dhexdhexaad yahay, oo leh a miisaanka u dhexeeya 4 ilaa 6kg. Jidhkiisu waa muruq, oo leh dherer dhexdhexaad ah iyo cago adag, oo suulasha dhaadheer leh. Waxaa lagu ilaaliyaa jaakad ka kooban timo gaaban oo mackerel ah, oo lagu xardhay madow ama bunni. Madaxa waa oval qaab ahaan, indhihiisuna waa kala fog yihiin midabkooduna waa mugdi. Dabogeedu wuu dheer yahay.
Waxay leedahay rajo nololeed inta udhaxeysa 14 iyo 18 sano.
Tani waa xayawaan leh heer tamar dhexdhexaad ah. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro, ordo, isla markaana waqti fiican la qaato qoyskiisa. Dabcan, jimicsi yar kadib, wuxuu eegi doonaa inuu kudhowaado bini aadamka uu jecelyahay inuu seexdo ama daawado telefishanka (ama uu daawado 🙂).
Toyger wuxuu jecel yahay inuu ordo sida ugu badan ee uu daaqadda u fiiriyo, wax uu shaki ku qaban doono maalin kasta. Sidoo kale, maadaama ay tahay dhogor aad u caqli badan waad awoodaa bar socodkiisa leh suunka iyo xarkaha laga soo bilaabo da'da aad u yar.
Daryeelka bisadda Toyger
Waa lagama maarmaan inaad siiso cunno tayo sare leh, hadey ila tahay, cunno qoyan, ama Barf, maadaama haddii kale uu ku dhici karo xasaasiyad ama u dulqaadasho la'aan cunto. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in cuntada la siiyo ay ixtiraamto dareenkeeda, taas oo aan ka ahayn tan ugaarsade.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, si aad caafimaad qab ugu jirto waa lama huraan in cuntadaadu ku salaysantahay hilib iyo / ama kalluun. Sidoo kale, sidoo kale waa muhiim in la akhriyo sumadda waxyaabaha ay ka kooban tahay dawaynta bisadu, maadaama haddii iyaga lagu sameeyo badarka aysan wax badan kuu tari doonin.
Timaheedu way gaaban yihiin, sidaa darteed uma baahna daryeel badan maadaama bisadda Toyger ay is daryeesho si ay nadiif u ahaato. Laakiin waa lagama maarmaan inaad ka caawiso timo dhintay, maadaama hadduu wax badan liqo kuwan ay ku urursadaan calooshiisa, iyagoo samaynaya waxa loo yaqaan kubbadaha timaha. Marka ha ka waaban inaad cadayato ugu yaraan hal mar maalintii burush gaar ah loogu talagalay xayawaankan.
Ma aha nooc cudurro halis ah leh, kana baxsan kuwa bisadaha kale ay yeelan karaan inta ay nool yihiin. Haddana adigu waxaad tahay daryeelehooda waa inaad u feejignaataa astaamo kasta oo soo muuqan kara oo adiga ku khuseeya, sida rabitaanka cuntada oo yaraada, taxaddar la'aan, ama caajis. Haddii tani dhacdo, waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ula xiriirtaa dhakhtarka xoolaha.
Sawir - Elelur.com
Bisad aan helin jacaylka iyo shirkadda ay uga baahan tahay qoyskeeda waa bisad aan ku farxi doonin. Sidaas darteed haddii aad runtii rabto Toyger, waa inaad isku daydaa inaad la qaadato inta ugu badan ee aad kari karto, oo aad u muujiso inaad jeceshahay (adigoon ka badin), tusaale ahaan la ciyaarista ama siinta daaweyn aan caadi aheyn.
Nooca bisadda Toyger waa mid cajiib ah. Inaad aad ugu egtahay shabeelka, waa macquul in laga fekero in kabadan qof doonayo inuu la noolaado xayawaankan. Laakiin go'aankaas yaan la fududeysan, laakiin waa inaad si fiican uga fikirtaa inaad awoodid inaad waqti la qaadato isaga, iyo inaad u daryeeli doontid sida uu mudan yahay.
Haddii aad ku jawaabtay haa, markaa waa inaad maanka ku haysaa in qiimaha eeyku uu u dhexeeyo 800 iyo 1000 euro, intaad kaheleyso meel ugub ah. Haddii ay dhacdo inaad doorato inaad ka hesho dukaanka xayawaanka, qiimaha ayaa ka hooseeya.
Sawirada bisadaha Toyger
Marabtaa inaad aragto sawirro badan oo ka mid ah bisadda Toyger? Waa kuwan dhawr kale:
Sawir - Toyger-cats.com
Sawir - Gatostigre.com
Sawir - Gabitos.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda quruxda badan ee Toyger
Bisada Savannah, tan ugu weyn